Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Vehivavy tompon’andraikitra no ilaina
Ady hevitra miseho lany etsy sy eroa ny toerana misy ny vehivavy eo anivon’ny fiaraha-monina. Ny fiaraha-monina voalohany misy ny vehivavy ny ankohonany izay iarahany amin’ny vadiny sy ny zanany. Mivelatra kely eo dia ny mpifanila vodirindrina aminy, ny mpiray tanàna, ny mpiray fokontany, ny mpiray kaomina, ny mpiray faritra, ny mpiray firenena. Azo ampidirina ao koa ny fikambanana misy azy, ny fiangonana ivavahany, ny asa sahaniny, sy ny sisa.
Rehefa mandinika ny ady hevitra entin’ny olona sasany momba ny toerana tokony hisy ny vehivavy eo anivon’ny fiaraha-monina isika dia somary lasa fisainana ihany satria na eo anivon’ny ankohonany aza dia misy lamina voajanahary natokan’ilay Nahary ho an’ny vehivavy. Na hanao inona ny lehilahy na hanao inona dia tsy afa-manoatra fa manaiky hoe “zara-asan’ny vehivavy ara-boajanahary io”. Na hanao inona koa ny vehivavy na hanao inona dia tsy maintsy manaiky fa misy zara-asa voajanahary ho an’ny lehilahy eo anivon’ny ankohonany. Dia toraka izany koa ny ambaratongan-drafitra.
Etsy ankilany, misy ny olona sasany, mety ho vehivavy nefa mety ho lehilahy koa no atosiky ny fihetsem-pony na ny resaka manome sehatra ho an’ny vehivavy dia milaza na mitaky bontolo hoe “zarao ny sehatra dia asio vehivavy”. Raha jerena amin’ny hoe “fitovian-jo” na izay tokony hanomezana sehatra azy, dia ao ny manindry mafy fa “na sehatra ilàna kalitao ara-pahaizana na ara-pahamendrehana na ara-traikefa… aza dia alefa na atolotra na tendrena hatrany ilay vehivavy. Misy koa ny lehilahy atosika noho izany.
Ohatra mivaingana no raisina. Satria takian’ny fomba fijery tato anatin’ny 30 taona eo ny tokony hanajana ny mira lenta. Ny dikan’io anefa akory tsy hoe “raha manendry minisitra lehilahy 10 ny filohampirenena dia tokony hanendry vehivavy 10”. Raha tena tompon’andraikitra ny filoha dia ny mombamomba ilay olombelona no itiliany ny tsirairay ho fototry ny fanendrena azy. Rehefa tena
mahita vehivavy tompon’andraikitra ny firenena iray dia mety ho voafidy filohampirenena mihitsy ilay vehivavy, na ho praiminisitra. Inona moa ny olana raha maro an’isa ao anatin’ny governemanta ny vehivavy amin’izany?
Ny tsy azontsika lavina koa anefa dia fiheverana fa hatreto dia mbola tsy afaka hifaninana amin’ny lehilahy amin’ny singa maro ny vehivavy. Misy dia misy ny vehivavy nahavita fianarana avo lenta amin’ny taranja iray, fa raha mitaha amin’ny lehilahy iny dia iray na roa amin’ny roapolo na mihoatra an’izay. Izay no mahatonga ny hoe “rehefa mba tafakatra eo amin’ny ampahefatry ny mpikambana mandrafitra rafitra iray ny isan’ny vehivavy dia efa faly ny maro”. Na ireo ampahefatra ireo koa aza anefa, tsy isa no vonjena fa ny maha-tompon’andraikitra, ary tokony ho izay ihany.
Na ny fidirana ho mpikatroka any anivon’ny antoko politika izay tokony hamolavola olom-pirenena tompon’andraikitra aza dia matetika tsy tena misongadina ny vehivavy. Tsy hoe noho izy vehivavy fa noho izy mbola voafetra ny sehatra tokony haha-tompon’andraikitra azy.
Tsy voninahitra mantsy ny tokony handraisan’ny vehivavy anjara amin’ny sehatra misy azy fa andraikitra ka mitaky vehivavy tompon’andraikitra ny fanavotam-pirenena sy ny fanarenana ny fiainam-bahoaka, raha ho antsika eto Madagasikara